VAOVAO 3 burner Gas mitono hena BBQ Outdoor Garden Patio Grills - China Shijiazhuang HGW Trading
VAOVAO 3 burner Gas mitono hena BBQ Outdoor Garden Patio Grills
3 burner Gas mitono hena
Family salantsalany / Tena sarobidy / Easy fivoriana
Hitondra ny fianakaviany ho amin'ny andro firavoravoana supersized ivelan'ny trano miaraka amin'ny fanampian'ny ny 3 burner entona BBQ. Complete amin'ny 3 Stainless stell burners lehibe, Integrated ignition rafitra, haorina tany habetsahan'ny hafanana, karazana verinia makarakara vy mifono mahandro, namindro fitoeran'entana, 2 lafiny talantalana farango sy tena ratsy kodiarana noho ny aina ny hetsika sy ny fitehirizana. Easy ny hanaraka fivoriambe toromarika omena. Fa fampiasana ivelan'ny trano ihany. Foana mamaky sy manaraka ny fampiasana sy ny fiarovana toromarika nomena.
Total faritra ny Grill 420sq.in.cooking ambonin'ny / insulation harato: 115sq.in. fahandro faritra: 305sq.in
2 bakoly mainty enameled mahandro grates & mainty enameled insulation harato
3 PCS Stainless vy buener * 12000BTU
QCC: Single burner: L = 25 "
Stainless vy ivelany ambony birao & fanaraha-maso tontonana
Black enameled vatana
Simple ny hovidiana fomba vatana
7 "Tsofy novolavolaina kodia
Tafavory vokatra Dimensions: 111.4 (L) * 53 (W) * 102 (H) CM
Mitady idealy 3 Burners Gas Grill Manufacturer & mpamatsy? Isika manana fantina lehibe amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anao hahazo famoronana. Ny Gas Grill for BBQ no azo antoka tsara. Origin China izahay Factory ny Gas Grill tamin'ny 3 Burners. Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay. Product Categories: Outdoor Product> BBQ Grill
Previous: Tongotra efatra kettle barbecues namboarina Grill amin'ny kodia
Next: BBQ Grill Stainless Steel Burners mitono hena amin'ny lafiny burner